I-EA060 - I-Alarm ye-Standalone Motion Sensor - Izixazululo ze-OMG
I-EA060 - I-Alarm ye-Standalone Motion Sensor
Isixazululo Sokuqapha se-Stand-Alone
I-EA060 Motion Sensor ikuvumela ukuthi ulondoloze ukuqwashisa okusebenzayo kokuhamba kwabahlali ngaphandle kokusebenzisa imingcindezi yokucindezela, imiphansi yaphansi noma amadivayisi wohlobo lwedonsa.
Izinketho Zokufaka Ezihlukahlukene
Inzwa yokunyakaza ingabekwa eceleni kombhede ukuxwayisa lapho othile ezama ukuphuma embhedeni, ngesihlalo sokuxwayisa lapho othile ezama ukusukuma esihlalweni, noma ngomnyango wokuxwayisa lapho othile ezama ukuphuma endaweni. I-TL-2700 isebenza ngebhethri futhi ime mpo ngaphandle kosizo ngaphakathi kombhede wepulasitiki ojikelezayo ongu-360 °. I-Cradle ingahle ifakwe odongeni nge-hardware enikeziwe kanye nezesekeli zokufaka ubakaki ezingakhethwa.
Indawo Ebanzi Yokutholwa
Le alamu yokuphuma kokunyakaza inenkambu ebanzi yokutholwa edlulela ngaphandle cishe ngamamitha angama-30 ukusuka ku-alamu. Noma yikuphi ukunyakaza okuphazamisa le nkambu kuzodala i-alamu.
-Ikela imibhede, imigwaqo noma iminyango
I-alamu ye-inzwa yokuhamba-yodwa neyodwa
-Azikho izintambo noma izintambo ezidingekayo
-Battery Iyasebenza (1-9 Volt, Ayifakiwe)
Ukubuka okuphelele kwe-7777 Ukubuka kwe-1 Namuhla